ရိုးရှင်းတဲ့ဘဝအတွက် လမ်းညွှန်ချက် ၆ ချက် – Miracle Times
ရိုးရှင်းတဲ့ဘဝဆိုတာ လူတိုင်းလိုချင်တဲ့ ဘဝမျိုးပေါ့။ ဒါပေမယ့်လူတိုင်းရဲ့ ဘဝတွေတိုင်းကတော့ ရိုးရှင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ရိုးရှင်းတဲ့လူနေမှုပုံစံနဲ့ ရှင်သန်ကြီးပြင်းချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်ရိုးရှင်းစွာ‌ တွေးတောကြံစည်နေထိုင်ပြုမူနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုမျိုး ရိုးရှင်းပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ လူနေမှုဘဝမျိုးကိုမှ နှစ်လိုသဘောကျတဲ့သူမျိုးတွေ ခရီးဖော် FM ရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေထဲမှာ ရှိကြလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ရိုးရှင်းတဲ့ဘဝမျိုးမှာ နေထိုင်လို့ရမယ့် အကြံပြုချက်လေးတွေကို ပြောပြပေးသွားမယ်နော်။
1. ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တွေးတောလုပ်ကိုင်ပါ
ဘဝမှာ ဘာတွေပဲဖြစ်လာပါစေ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း တွေးတောကြံစည်ပြီး တုန့်ပြန်နိုင်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီအချက်က ရိုးရှင်းတဲ့ လူနေမှုပုံစံရဲ့ ပထမဆုံးနဲ့ အရေးအကြီးဆုံး ဥပဒေသလည်းဖြစ်ပါရဲ့။ အရေးပါတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ ဦးစားပေးရမယ့်အရာတွေကို ရှင်းလင်းစွာ တွေးမြင်နိုင်စွမ်းရှိမယ်ဆိုရင် အရာရာတိုင်းက ပိုပြီးလုပ်ရကိုင်ရလွယ်ကူနေပါလိမ့်မယ်။ ပျော်ချင်ရင်ပျော်ပြီး စိတ်ညစ်ရာရှိရင်လည်း စိတ်ညစ်လိုက်ပေါ့။ ဒါက အရိုးရှင်းဆုံး စိတ်ခံစားချက်ပဲမဟုတ်လား။ ပျော်သလိုလို စိတ်ညစ်သလိုလိုနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှုပ်ထွေးနေတာတွေကို ရပ်တန့်လိုက်ပါတော့။
2. ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ဖို့က ဦးစားပေးပါ
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်နိုင်မှ တခြားသူတွေကိုပါ တစ်ဆင့်ပြန်ကူညီနိုင်မှာပါ။ မြတ်စွာဘုရားတောင်မှ အတ္တဟိတ၊ ပရဟိတလို့ဟောခဲ့တာပါ။ ပရဟိတ၊ အတ္တဟိတလို့ ဟောခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ဖို့ တိုက်တွန်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ အူမတောင့်မှ သီလစောင့်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောတရားမျိုးကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
3. အတွေးအကြုံ‌ကောင်းတွေကို ရှာဖွေပါ
ကောင်းမွန်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို ရယူနိုင်ဖို့ တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့၊ နှမျောတွန့်တိုမနေပါနဲ့။ အတွေ့အကြုံကောင်းတွေဟာ ဘဝရှင်သန်ရပ်တည်ရေးမှာ ခွန်အားတွေ၊ အသိဉာဏ်တွေဖြစ်တာမို့ မှန်ကန်ပြီး ရိုးရှင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချမှတ်နိုင်ဖို့အတွက် အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
4. စိတ်ချမ်းသာမှုကို အားပြုပါ
စိတ်ချမ်းသာမှ ကိုယ်ကျန်းမာမှာဖြစ်သလို၊ စိတ်ချမ်းသာနေရင် အရာရာလည်း အဆင်ပြေချောမွေ့နေမှာ မဟုတ်လား။ ဒီတော့ စိတ်ချမ်းသာ အေးချမ်းနေမှုက သင့်ကို ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ဘဝတစ်ခုကို တည်ဆောက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ရိုးရှင်းစွာ ပြုမူနေထိုင်ကြသူတွေတိုင်း စိတ်ချမ်းသာတတ်ကြတာမို့ ဒီနှစ်ခုရဲ့ ဆက်စပ်မှုက ဘယ်လောက်တောင် အရေးပါတယ်ဆိုတာကို မြင်နိုင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
5. တဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးတက်ပါစေ
ဘာပဲလုပ်လုပ် အလျှင်လိုနေဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ တဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးတက်မှုကို ရှာဖွေနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ပြာလောင်ခတ်ပြီး ဖုတ်ပူမီးတိုက်ဖြစ်နေတဲ့ တိုးတက်မှုတွေဟာ အခြေမခိုင်တတ်တာမို့ တချိန်ချိန်မှာ ပြိုလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ သင်က အေးရာအေးကြောင်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင် ပိုတည်ငြိမ်ပြီး ပိုခိုင်မာတဲ့ တိုးတက်မှုတွေ၊ နည်းလမ်းတွေကို ရှာတွေ့မှာသေချာပါတယ်။
ကိုယ်ဘယ်ကနေလာတယ်၊ ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ရတယ်၊ ဘယ်လောက် အပင်ပန်းခံတည်ဆောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့။ ဒါတွေက သင့်တွက် တွန်းအားဖြစ်သလို သင့်ဘဝရဲ့ ပဲ့ထိမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ မှတ်တိုင်တွေက သင့်ဘယ်လိုလူဆိုတာကို အမြဲပြန်ပြောပြပေးနေမှာပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မမေ့မှုကလည်း ရိုးရှင်းတဲ့ လူနေမှုပုံစံရဲ့ အရေးပါတဲ့ အချက်တစ်ခုပါပဲတဲ့ဗျား။
Lifestyle, Minimalist Lifestyle